Xildhibaan Odowaa oo sheegay in xalka Soomaaliya uu yaalo Shirka Dhuusomareeb | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Xildhibaan Odowaa oo sheegay in xalka Soomaaliya uu yaalo Shirka Dhuusomareeb
Xildhibaan Odowaa oo sheegay in xalka Soomaaliya uu yaalo Shirka Dhuusomareeb
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa sidoo kalana ah Xog-hayaha Madasha Xisbiyda Qaran ayaa qoraal uu bartiisa Facebooga soo dhigay ku sheegay in ay muhiimtahay Farmaajo inuu garowsadaa xaalada dalka ku jiro.
Musharaxii hore ee jagada Madaxweynenimo Galmudug ayaa sidoo kale sheegay xalka kaliya ee maanta furan uu yahay shirka Dhuusomareeb 3 kaasoo ay kuwada balansanyihiin dowlada Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah lagana doonayo natiijo wax ku ool ah iney kasoo baxdo.
Qoraalkii Xildhibaan Odowaa ayaana sidaan u qornaa;
“Waxaan rajeyneynaa in Madaxweyne Farmajo uu garowsan yahay xaalladda adag ee uu dalku ku sugan yahay, berina uu xildhibaanadda la hor iman doono wax dalka lagu badbaadinayo oo ah jidkii loo mari lahaa doorasho laga wada raalli yahay.
Jidka kaliya ee u furan Madaxweynaha waa in Dhuusamreeb 3 loo wada guntadaa sidii la isugu wada tagi lahaa ugana soo bixi lahaayeen qaab doorasho oo la isla ogolyahay.